------Mpanamboatra & mpanondrana LED Display tokana azo itokisana.
Orinasa niorina tamin'ny taona 2015 niaraka tamin'ny ekipa nanokan-tena tamin'ny indostrian'ny fampisehoana nitarika nanomboka tamin'ny taona 2006.
Miaraka amin'ny fanahin'ny tsy fivadihana, ny fanajana, ny fahaiza-manaony ary ny fiaraha-miory, Yonwaytech dia manorina sy mitazona fahatokisana lalina amin'ny mpanjifantsika, ny mpivarotra ary ny ekipantsika.
Mino ny fironan'ny mpanjifa, Yonwaytech dia mandray anjara hatrany amin'ny fanomezana serivisy avo lenta amin'ny alàlan'ny asantsika.
SHENZHEN YONWAYTECH CO., LTD ho mpamatsy manerantany manokana amin'ny famolavolana, fanamboarana ary serivisy LED DISPLAY sy famantarana nomerika.
Manolotra vahaolana LED SCREEN ho an'ny fampiharana an-trano sy ivelany maro izahay, anisan'izany ny efijery HD narrow pixel pitch led, fampiratiana raikitra an-trano, efijery fanofana sehatra anatiny, afisy nitarika antsinjarany, fampisehoana tsy ara-drariny tsy ara-dalàna, efijery efamira anatiny, efijery andry LED, mangarahara led display, flexible led display, commercial led display, taxi topper led screen, smart talantalana led display, outdoor full color fixed led display, outdoor event rental water proof led display, curtain led display, outdoor IP67 led screen, energy saving led display , Fampisehoana LED kianja, fampisehoana led perimeter ary fampisehoana LED hafa namboarina ho an'ny tetikasa namboarina.
Miaraka amin'ny fanampian'ny andian-dahatsoratra feno milina mandroso sy fitaovana be pitsiny mandrakotra ny isan-karazany ny dingana famokarana ao anatin'izany ny R&D, injeniera, famolavolana sy ny famokarana, Yonwaytech dia manatanteraka hentitra ny fitsipiky ny ISO9001 rafitra fanaraha-maso kalitao iraisam-pirenena amin'ny famokarana fahaiza-manao 3,000 metatra toradroa ny LED fampisehoana isam-bolana.
Ny andiana entana tsirairay dia handalo fitsapana henjana henjana, fitsapana hovitrovitra, fitsapana mari-pana ambony sy ambany ary 72 ora ny fahanteran'ny vokatra alohan'ny fanaterana.
Manome tolotra 24/7 mialoha ny fivarotana sy fanohanana ara-teknika ho an'ny mpanjifanay izahay, azo omena ny tolo-kevitra ara-teknika na ny teti-bolan'ny tetikasa.
Tetik'asa namboarina miaraka amin'ny sketch sy famolavolana ati-doha miaraka amin'ny mpanjifanay mandritra ny serivisy varotra.
Ny fanohanana ara-teknika maimaim-poana sy ny fanofanana dia azo omena ny mpanjifantsika, 2-5 taona fiantohana azo atao araka ny filan'ny mpanjifa.
Ny fampisehoana led dia mahafeno fepetra ho an'ny tsena samihafa miaraka amin'ny fanamarinana toy ny CE, EMC, UL, ETL, IECEE, SASO sns.
Miaraka amin'ny traikefa manankarena amin'ny indostrian'ny fampisehoana LED, dia manome fahafahana ny mpanjifa hahatratra ny vahaolana tsara indrindra amin'ny kalitaon'ny efijery avo lenta miampy vidiny mirary.